Ururka Somaliland Society In UK (SSUK) Oo Gudoomiye Cusub Doortey |
Ururka Somaliland Society In UK (SSUK) Oo Gudoomiye Cusub Doortey
London – Ururka Somaliland Society UK oo ka dhisan dalka Britain, Isla- markaana ka shaqeeya Danaha iyo Xidhiidhka labada dal ee Somaliland Iyo Ingiriiska , Ayaa shalay 25 January 2019 doortay Gudoomiye cusub oo ururkaasi yeelan doono. Xubnaha Ururka SSUK oo shir gaar ah ku qabsadey Bariga Magaaladda London Galabnimadii Jimce (25/01/2019). Ayaa shalay halkaasi ku doortay Gudoomiyaha cusub Mudane Maxamuud Xasan Cabdi , Kaasi oo si rasmi ah u wadi doona Howlaha ururka (SSUK).
Hadaba xafladan oo si fiican loo soo agaasinay ayaa bilaabantay shalay galab abbaarihii 3:00pm galabnimo. Gudoomiyihii hore ee SSEUK Mudane (Abdalla Saalim) ayaa ugu horeyn isagu shirka furay kana war-bixiyey wax-qabadkii ururka mudadii uu soo jirey.
Kulankaasi oo ay isugu yimaadeen Guddida SSUK , Ayaa waxaa goobjoog ka ahaa iyaguna oo hadallo qiimo badan ka jeediyey: Sarakiil Sar-sare oo ka tirsan Safaaradda S/land UK : Oo ay Ka mid Yihiin Safiir ku Xigeenka Somaliland ee UK: Ruug Cadaa Mudane Daahir Tukaale Iyo Xidhiidhiyaha Safaaradda JSL ee UK Marwo. Yurub Qaalib Faarah Iyo Dublamaasiyiin Kale.
sidoo kale xubno kaloo ka tirsan xisbiyadda Qaran: Sida Gudoomiye Ku Xigeenka Xisbiga Kulmiye Ee Wadanka Ingiriiska Md Axmed Cabdilaahi (Axda)
Gudoomiyaha xidhiidhka Laamaha Xisbiga Waddani Mud Axmed Cali Naahi, Afhayeenka Xisbiga Wadani ee Qaarada Yurub Mud Qassim Adan Suleymaan, Siyaasi Abdi-Qaadir Maamud Guud-cade (Qaadiro) iyo weliba Siyaasiyiin, Suxufiyiin Iyo wax-garad ka tirsan Bulshada Somaliland ee ku dhaqan UK oo rag iyo Haweenba ah.
Warbixinahaasi qiimaha badan ka-dib. Ayuu Gudoomiyaha cusub ururka SSUK Md. Maxamuud Xasan Cabdi , hadal yaroo kooban ka soo jeediyey madashii u halkaasi ka sii wadi doono dadaaladii Ay sameyeen Gudomiyayaashii ka horeyay. Isagoo ballan qaaday inuu shaqada barteedii ka sii wadi doono siina labo jibaari doono idam alle.
Isku soo wada duuboo dadkii halkaasi ka hadlay Ayaa dhamaan Gudoomiyaha Cusub waxay u balanqadeen inay la shaqeyndonaan isla-markaana u rajeeyey in hawsha u fududeeyo insha Allaah.” Sidaasina loogu duceeyay in Illaahay ku guuleeyo hawshaa loo igmaday. Xafladda ayaa ku soo dhamaatay jawi qurux badan oo ay u wada riyaaqeen dadkii ka soo wada qayb-galay.
Wa billaahi tawfiiq.